Kumiswe abasebenzi ababili e-Unisa ngezokunukubeza ngokocansi | News24
Johannesburg - Inyuvesi i-University of South Africa (Unisa) ngoLwesihlanu ithI ikhathazekile ngezinsolo zokunukubezwa ngokocansi noma zokudwengula ezibhekene nomunye wabasebenzi besikhungo se-Early Childhood Education (UCECE).
"Sithanda ukusho ukuthi i-Unisa ayihambisani nanoma yiluphu uhlobo lokuhlukumeza emsebenzini kanti uma kunemibiko engenayo yokuhlukumeza, leyo mibiko iyaphenywa kuze kufike emaphethelweni," kusho abenyuvesi ePitoli.
OLUNYE UDABA:Kudlwengulwe ozithwele eLimpopo
Abesikhungo bathi sebemise abasebenzi ababili ngalezi zinsolo.
"Inyuvesi ikuqaphele nokuthi lezi zinsolo zibikelwe amaphoyisa e-South African Police Service (SAPS), nawo enza uphenyo ngazo. Inyuvesi izosebenzisana nophenyo lwamaphoyisa.
"Okwamanje, sicela uphenyo lwamaphoyisa nolwenyuvesi lungaphazanyiswa luze lufike emaphethelweni. Abaphathi baphinde bacela ukuba uma bekhona abasebenzi noma izitshudeni ezihlukunyezwayo babikele abantu abafanelekile futhi kulandelwe imigudu efanele."